तालिबानसँग कहिल्यै नहारेको पन्जसिरले यसपटक घुँडा टेक्ला त? (पन्जसिरको कथा) - Dainik Online Dainik Online
तालिबानसँग कहिल्यै नहारेको पन्जसिरले यसपटक घुँडा टेक्ला त? (पन्जसिरको कथा)
प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार ९ : ३९
तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको अधिकाँश भू–भाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तर एउटा प्रान्तले भने तालिबानविरुद्ध युद्ध गर्ने वाचा गरेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानमा सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा पन्जसिर प्रान्तले भने तालिबानको प्रतिवाद गरिरहेको हो जुन तालिबानको कब्जामा जान सकेको छैन।
यतिबेला तालिबानले हजारौं लडाकुहरु पन्जसिरमा पठाएको छ। पन्जसिर तालिबानको हातमा जाने खतरा बढिरहँदा हालसम्म आफूले तालिबानका ३ सय लडाकु मारिसकेको तालिबान विरोधी समूह नेसनल रजिस्टेन्स फ्रन्ट एनआरएफले बताएको छ र तालिबानविरुद्ध आफूहरु युद्धको लागि तयार भएको पनि उनीहरुको भनाइ छ। तर सोमबार मात्र तालिबानले पन्जसिर उपत्यकाको तीन जिल्ला आफ्नो कब्जामा आइसकेको बताएको छ। एनआरएफ लडाकु
बेलायत, तत्कालिन सोभियत संघ र तालिबानसँग कहिल्यै हारेन पन्जसिर
पन्जसिर उपत्यका केन्द्रिय राजधानी काबुलदेखि १५० किलोमिटर उत्तरी क्षेत्रमा पर्दछ। यो अफगान छापामार युद्धको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। १९ औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यका सेनाले अफगानिस्तान कब्जा गर्न खोज्दा यो क्षेत्रमा उनीहरु टिक्नै सकेनन्। सन् १९८० मा तत्कालिन सोभियत संघले काबुल नियन्त्रणमा लिँदा यो प्रान्तले सोभियत संघको प्रतिवाद गर्यो। अहमद शाह मसुदको नेतृत्वमा सोभियत सेना यहाँ छिर्न सकेनन्।
यस्तै सन् १९९६ देखि पाँच वर्षसम्म जब अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन आयो तब पनि पन्जसिर तालिबानको कब्जामा आएन। तालिबानविरुद्धको समूह एनआरएफका प्रमुख अहमद शाह मसुदलाई ‘पन्जसिरको सिंह’ भनेरै चिनिन्थ्यो। पन्जसिर उपत्यका भौगौलिक हिसाबमा जटिल क्षेत्र हो। त्यहाँ छिर्ने एउटै पहाड बिचको खोलाको बाटो छ। जसका कारण त्यहाँका लडाकुले दुश्मनलाई सहजै माथिबाट आक्रमण गरेर जित हासिल गर्न सक्छन्।
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमण गर्नभन्दा दुई दिन अगाडि मात्र अलकायदाले अहमद शाह मसुदको हत्या गरेका थिए। यतिबेला तालिबानविरुद्धको मोर्चा एनआरएफ अहमद शाहका छोरा अहमद मसुदले सम्हालेका छन्। तालिबानले पन्जसिर घेराउ गरेको खबरबीच अहमद मसुदले आत्मसमर्पण आफ्नो शब्दकोशमै नभएको बताएका छन्। अहमद मसुद आफ्ना लडाकुलाई सम्बोधन गर्दै
मसुदले आफ्नो मोर्चामा पूर्व सेना र प्रहरी भएको दाबी गरेका छन्। उनले वर्षौसम्म हतियारहरु संकलन गरेर राखेको र त्यो अब तालिबानविरुद्ध प्रयोग हुने बताएका छन्। उनले गतहप्ता वासिङ्टन पोस्टसँग भनेका थिए,‘हामीसँग गोला बारुद र हतियारको भण्डार छ जुन हामीले धैर्यपूर्वक हाम्रो बुबाको समयदेखि संकलन गरेका थियौं, किनकि हामीलाई थाहा थियो यो दिन आउन सक्छ।’ उनी भन्छन्,‘यदि तालिबानहरुले आक्रमण गरे भने पक्कै पनि उनीहरुले हामीबाट कडा प्रतिरोधको सामना गर्नेछन्।’
यसैबीच वाजिर अकबर मोहमन्द जो अफगान सेनाका पूर्व मेजर हुन् उनी पनि एनआरएफमा आवद्ध भएका छन्। उनले हालै भनेका थिए,‘पहाडमा स्नाइपर, सडकमा अवरोधका साथ २० हजार लडाकु युद्धका लागि तयार छन्।’ अहिले तालिबालने पन्जसिर पुरै घेराउ गरेको खबरबीच पनि एनआरएफ विद्रोहीले आफूहरु युद्धको लागि तयार भएको बताएका छन्। यद्यपी तालिबानविरुद्धको यो समूहका प्रवक्ताले युद्धभन्दा अगाडि शान्ति वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एनआरएफले तालिबानसँग सर्त राखेको छ।
एनआरएफका प्रवक्ता नजरीले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार तालिबान विरोधी नेता अहमद शाह मसुदका छोरा अहमद मसुदको नेतृत्वमा हजारौं लडाकु तालिबानविरुद्ध जम्मा भएका छन्। नजरीका अनुसार उनीहरु सार्थक छलफल गर्न तयार छन् र परेको खण्डमा युद्धको लागि समेत तयार छन्।
उनले भनेका छन्,‘नेसनल रेजिस्टेन्स फ्रन्ट यो विश्वास गर्दछ कि स्थायी शान्तिको लागि अफगानिस्तानको मूलभूत समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ। मूलुकले जुन बाटो पछिल्लो ४० या सय अथवा २ सय साल अगाडि अंगालेको थियो अब त्यो त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सक्दैनौं।’ नेसनल रेजिस्टेन्स फ्रन्टका अनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या केन्द्रिकृत राजनीतिक व्यवस्था हो। पन्जसिरको सिंह
‘अफगानिस्तान विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकको देश हो। यो विविधतापूर्ण संस्कृतिको घर हो। यहाँ सत्तामा साझेदारीको जरुरत छ। सत्तामा हरेक समुदायलाई समेट्नुपर्छ। यदी कुनै एकल राजनीतिक शक्ति हाबी हुन खोज्छ भने त्यो कदापी हुन सक्दैन, त्यसले गृहयुद्धलाई बढावा दिन्छ र लडाइँ जारी रहन्छ’ अली नजिरले भनेका छन्।
तालिबानले महिलालाई कमै मात्र अधिकार दिएको छ तर एनआरएफ महिला पुरुष बराबर सिद्धान्तमा केन्द्रित भएको समूह हो। यस्तै पन्जसिरका बहुसंख्यक नागरिक जातीय हिसाबमा ताजिक हुन् भने तालिबानहरु पास्तुन समुदायका हुन्। जसका कारण एनआरएफले सत्तामा समावेशी साझेदारीको माग गरेको हो।
एनआरएफले विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सक्रिय भएको र त्यो आतंकवादबाट अमेरिकी रुचि र माटोलाई हानी पुग्ने पनि बताएको छ। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटना नदोहोर्याउन पश्चिमा राष्ट्रले एनआरएफलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि तालिबानविरुद्धको सो मोर्चाको आह्वान छ। (सीएनएन र एजेन्सीको सहयोगमा)